travelfrance Archives | Page 2 of 4 | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Ma dheer ka dib Tunnel Channel sida badan tixraac sida Tunnel Eurostar furay in 1994, waxaa lagu magac daray mid ka mid ah mucjiso Toddoba ka mid ah aduunka Modern. Sida laga soo xigtay Ururka American ee Injineerro Civil, horyaalka in uu si wanaagsan u qalmay. It put the…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Haddii aad u yaabsan meesha laga helayo matxafyada ugu fiican Yurub, waxaan kugu daboolay! Haddii ay tahay tahay, qaran, ama taariikh dabiici ah, matxafyada ka our liiska ma uu taag darnaan doono inay idin yaabiyo. Waa maxay more, waxaad ku gaari kartaa meelahaas oo dhan tareenka…
Halkee laga heli karaa Europe intooda badan wayn Architecture
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Raadinta si aad u aragto qaar ka mid ah naqshadaha fiican ee aad fasax soo socda? Haddii ay sidaas tahay, waxaa laga yaabaa in ay tahay meel ka wanaagsan Europe kuu. Haddii aad xiisaynayso ee Hababka naqshadda dhismaha classical ama rajeynaya in la helo qaar ka mid ah alaab-ka yar oo loo yaqaan, magaalooyinka Yurub kugu daboolay. Aynu eegno…
Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Safar Talyaani, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo France waa inay magaalooyinka ay qurux badan oo dalka durkiya caan mahad kulkulul dalxiis loo jecel yahay. Dalku waa meel riyo caan adduunka oo ay dhaqan cajiib ah oo cuntada delicious. Inkasta oo dalxiisayaal badan oo ido in Paris, magaalada inta badan noqon kartaa mid aad u buux-, gaar ahaan…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Ma jeceshahay safraya tareen? Ma jeceshahay arkaya qalcado la yaab leh in dal sida France? Haddii ay taasi kiiska, ka dibna aad gaadhay meel sax ah. Taasi waa maxaa yeelay this article “10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka” will give you a definitive list of…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Disneyland Paris inta badan waa caalamiga ah Disney Park ugu horeysay ee ay taageerayaal badan in ay soo booqdaan. Ma rabtaa in aad ogaato sida ay u qorsheeyaan ay fasax Disneyland ugu fiican ee Paris lagu jiro xagaaga iyo jiilaalka? Markaas aad yimaadeen meeshii xaq u! Waxay ku taallaa in Marne-la-Vallee, a suburb of…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Markii nin socoto ah sheegaye booqanaya France, dadka intooda badan isla markiiba u qaadan lahaa Paris. Si kastaba ha ahaatee, caasimada France magaaladanuna ma aha magaaladii oo keliya qiimihiisu booqanaya dalka this qurux badan, U safarka Strasbourg waa IN cusub. meelo kale oo badan waa sida istaahila mahadnaq ah oo dhan…